HomeSpainCarlo Ancelotti Oo Ku Adkaystay In Uu Wali Furan Yahay Tartanka Horyaalka Spain
Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ku adkaystay in aanay wali kooxdiisu ka hadhin tartanka loogu jiro horyaalka dalka Spain, kadib laba guul-darro oo qadhaadh oo haleelay kooxda Real Madrid.
Ancelotti ayaa sheegay in kooxdiisu ay wali haysato fursad ay kula tartami karto kooxaha kale, isla markaana ay ku hanan karto horyaalka oo ay ka hadhsan yihiin siddeed kulan.
Ancelotti oo warbaahinta la hadlay ciyaartii xalay ee Sevilla ay 2-1 ku garaacday ayaa yidhi ““Qaybtii hore waxaannu u ciyaarnay si wanaagsan, waxaannu samaynay fursado badan oo aan goolal ku dhalin karaynay laakiin kama aanan faa’iidaysan. Qaybtii danbe Sevilla si fiican ayey u xidhatay difaaceeda, annaguna waanu ku guul-darrraysanay in aanu goolkayaga ilaashanno oo waxa la naga dhaliyey laba gool.”.
“Guul-darrooyinka naga soo gaadhay kooxaha waaweyni dhibaato ma leh, horyaalkuna waa mid dheer oo adag waana suuro gal inaad guulaysato ama aad ku guul-darraysato garoomo kale”. Ayuu yidhi Ancelotti.
Waxa kale oo uu sheegay in wali ay kooxdiisu haysato fursad ay isku muujin karto oo ay guulo ku gaadhi karto, waxaanu yidhi “Si aad ugu guulaysato horyaalka waa inaad aamintaa inaad xagga dambe ka soo wanaagsanaan kartid, oo aad awood u leedahay inaad ku guulaysato, laakiin ma aha inaad fadhiisato oo aad ka fikirto sababihii keenay guul darada”.
Ancelotti ayaa la waydiiyay haddii ay guul daradani saamayn ku yeelan doonto kulanka Champions League ee Borussia Dortmund wuxuuna ku jawaabay: “Waxaan rajaynayaa in aanay taasi dhici doonin, kooxdu dhawr jeeer ayay jawaab ka bixisay guul-darooyin soo gaadhay, waxaannu leenahay karti iyo tayo aannu kaga gudbi karno wakhtiyada xun, waa in aannu horay u sii soconaa”.
Markii Ugu Horeysay Oo Ruux Dumar Ah Tababare Looga Dhigay Naadi Horyaalada Waaweyn Ee Yurub Ka Tirsan